Khabiirka Kala Duwan: Sida loola dagaallamo Xakamaynta Weerarada Cyber ​​Pyramids
qarnigii 21aad, nabadgelyada website-yada iyo codsiyada webka ayaa cadeeyaynoqoshada dareenka ugu muhiimsan adduunka. Dhammaan shirkadaha ku hawlan ganacsiga iyadoo adeegsanaya tiknoolajiyad ayaa u nugul dhibaatadaas.Ganacsatada qaarkood ayaa horey u ahaa dhibanayaasha weerarrada Cyber ​​halka kuwa kale ay sii wadaan inay ku shaqeeyaan goobaha internetka ee khatarta ah ee buuxaof hackers - oculos espelhado rosa dior.
Frank Abagnale, oo ah Maamulaha Guusha Macaamilka Sare Sare Adeegyada Digital, waxay ujeeddadiisu tahay inay ka digtoonaadaan ganacsiyada internetka sida looga hortago weerarrada Cyber ​​ee codsiyada internetka ama bogagga internetka. Intaa waxaa dheer,Talooyin muhim ah oo ay shirkadu ku fulin karto kor u qaadidda tallaabooyinka ammaankooda ayaa sidoo kale lagu muujiyay. Tani waxay ku xiran tahay, waa muhiimin la fahmo in shirkadaha waawayn iyo kuwa firfircooni ay saameyn karaan kambaska. Tusaale ahaan, Zamota waa la jabsaday bilowgii sannadkan,iyo macluumaadka qarsoodiga ah iyo xogta dadka isticmaala 'database' ayaa si khaldan loo isticmaalay qawaaniinta. Sidee ayaad uga ilaalin kartaa boggaga internetka ee weerarada Cyber?
Si aad u bilowdo, isticmaal codsiyada cusub iyo software. Ku dhowaad dhammaan milkiilayaasha goobtamaqal ku saabsan Magento, Joomla, iyo WordPress oo haysta fursado cusboneysi ah oo u baahan riix batoonka si ay u soo dejiyaan ama u rakibaan ugu dambeyntiiplugins iyo qaybaha. Marka la eego, horumarinta goobaha iyo dadka isticmaala ayaa looga digayaa in ay doortaan khidadaha la qiimeeyay ee hooseeya tan iyo markii weeraryahannada ay dhici kartoayaa si ula kac ah u abuuray iyaga oo ujeedadoodu tahay shabakadaha internetka ee jabhada. CMS (Nidaamka Maareynta Maadiga) sida WP (WordPress) iyoMagento waxay ilaa iyo hadda si taxadar leh u shaqeysey si ay u helaan goobo. Intaa waxaa dheer, nuquladani waxay sii wadaan inay si joogta ah u sii daayaan xakamaynta amnigawebsaydhooyin badan oo xooggan oo loogu talagalay ammaanka internetka..Mid ka mid ah meelaha ugu nugul waa maaraynta martida. Si kastaba ha ahaatee, ganacsatada internetka ayaa lagula talinayaaIsticmaal xalka martigelinta. Shirkadda martigelinta ahi waxay xajisaa daryeelka cusub ee ammaanka iyada oo la isticmaalayo xirmada. Sidaa daraadeed, ganacsiyada markasta way kuha ahaato mid amaan ah oo ka soo horjeeda.
Badbaadinta furaha iyo digniinta waa talaabada labaad ee ammaanka ee shabakadaha. OnlineIsticmaalayaasha waa inay abuuraan oo dayactiraan furaha ereyada adag oo ka kooban jilooyin gaar ah, alifbeetada, iyo tirooyinka si aan cidna u dhibin karin.Isla ogeysiis la mid ah, milkiilayaasha goobaha iyo isticmaalayaashu waxay ku xiran karaan qaar ka mid ah alaabo la xidhiidha Google oo ka hortagaya xatooyo sirta ah internetka kalecodsiyada webka ama goobaha. Tusaale ahaan, browser browser wuxuu bixiyaa dheereyn loo yaqaan "Password Alert", kaas oo la soo dejin karo iyosi xor ah u rakibay mishiin kasta.
Seddaxleey, qalab ku shaqeeya goobta oo ka hortagaysa DDoS (Diidmada Adeegga Diidmada).DDoS waa isbeddel soo koraya oo loogu talagalay weeraryahanno iyo isbaarooyin si ay u soo diraan taraafikada been abuurka ah ee bog gaar ah oo ka mida taas oo ka dhigaysa mid aan la heli karin.Qadarka weyn ee gaadiidka ka dhigaya goobta aan la heli karin waxaa laga soo diraa ilo kala duwan. Asal ahaan, waa halis suurtogal ah in dhammaan nidaamyadacaalami ah oo la qabadsiiyo oo la xakameynayo Trojans iyo weeraryahannadu waxay hal beegsadeen hal mar mar. Google wuxuu leeyahay alaab la yiraahdo GoogleMashruuca Shield si loo ilaaliyo boggaga cusub ee weerarada xun ee DDoS. Adeeggu wuxuu diyaar u yahay isticmaalka bilaashka ah ee wargeysyada yar yar ee internetka,goobo cusub, iyo wariyaal madaxbannaan.
Ugu dambeyntii, isticmaal web server marti gelin ah. Serwer qaddarin leh ayaa ammaan badanmarka loo eego shabakada martigelinta martigelinta serverka leh dhowr goobood mar. Waxay ka hortagtaa mulkiilaha goobta ka soo jeeda kuwa xagjirka ah ee isticmaala dayacankahal goob si aad u jabiso boggaga kale ee ku jira server-ka. Tixgeli isticmaalka adeega martigelinta webka kuwaas oo bixiya dukumiintiyada shabakadaha internetkamartigelinta xafiisyada.